Dowladda Soomaaliya ayaa shirkado ku tartansiinaysa soo saarista calanka - BBC News Somali
Dowladda Soomaaliya ayaa shirkado ku tartansiinaysa soo saarista calanka
Image caption Wasiirka ganacsiga ayaa sheegay in dadka ay maradii buluug ahba calan ka dhigtaan
"Warqadaas anaga ayaa soo saarnay, waxaana jirta in tan iyo burburkii ay dadka iska gadanayeen maro kasta oo buluug ah, xitaa waxaa jira dad calanka ku dhigay xiddigo dheeraad ah" ayuu yiri wasiirka oo qadka taleefoonka noogu waramay isaga oo Muqdisho ku sugan.
Image caption Maxamed Xayir Maareeye wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya
"Shirkaddii kale ee keenta calanka kadib marka tartanka dhammaado waxaa loo aqoonsanayaa in ay sharciga ganacsiga burisay" ayuu yiri Maareeye.
Trump oo "illaaway" heesta calanka Mareykanka
Waxa kale oo uu sheegay in ay dowladda ka iibsan doonto calamada shirkadda guuleysata "haddaba dowladda waa ay soo iibsataa calamada, gaar ahaan marka ay xafladaha qaran jiraan" ayuu yiri wasiirka oo intaas ku daray in shirkaddaha laga doonayo in ay iyagu maalgashiga sameeyaan.
Sida ku xusan heesta calanka Soomaaliya, waxaa erayadeeda ka mid ah "Qolaba calankeedu waa cayn, inaga keenu waa cirkoo kale, oo aan caadna lahayn". Meeris kale oo isla heesta ah ayaa ka hadlaysa xiddigta shanta geeska leh.
Lahaanshaha sawirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha
Image caption Sawir ay dowladda soo saartay oo muujinaya midabka saxda ah iyo kuwa mamnuuca ah
Lahaanshaha sawirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya
Image caption Warqadda ay wasaaradda ganacsiga soo saartay